बिरामीको घरमै गएर अस्पतालको जस्तो सम्पूर्ण सेवा दिने 'मेरो हस्पिटल' - Health TV Online
हेल्थ टिभी अनलाइन 261 Views
एक जना डाक्टर जसले आफै बिरामी परेपछि आवश्यकता ठानेर खोलेको होम बेस्ड हेल्थ सर्भिसले अहिलेको कोरोना कालमा झनै यसको औचित्यता पुष्टि गरेको छ । ४ वर्षअघि वीर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर रुप नारायण शाहको कलेजोमा समस्या देखियो र अन्तत प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो । उनले भारतमा गएर कलेजो प्रत्यारोपण गराए । प्रत्यारोपण त गराए तर डिस्चार्ज भएपछि दैनिक रुपमा फलो अप, ड्रेसिङमा जानपर्ने भएकाले उनलाई त्यो हिंडाई अत्यन्त पीडादायी हुन्थ्यो । जटिल प्रकारको शल्यक्रिया भएकाले घाउ सफा गरिरहनपर्ने र फलोअपमा दैनिक रुपमा जानुपर्ने । भनेको बेला ट्याक्सी नपाइने, पाइए पनि आफू बसेको घरको भर्याङबाट ओर्लिन उक्लिन नै निकै कठिन थियो । त्यो आफूले भोगेको पीडाले उनको मनमा एउटा कुरा खेल्यो । मलाई कसैले घरमै आए फलो अप गर्दिने, घाउ सफा गर्दिने स्वास्थ्यकर्मी पाए त अस्पतालसम्म जानपर्ने दुख हुन्थेन भन्ने लाग्यो । उनले अस्पतालमा कुरा गरे र नभन्दै एक जना स्वास्थ्यकर्मी उनको रेखदेखमा उनको घरमै पठाइदियो जसले गर्दा उनले रगत जाँच गर्न, घाउ सफा गर्न अस्पताल जानै परेन । केही अप्ठेरो परेमा ह्वाट्स अपमा कुरा समेत गर्न सकिने । उनी अन्तत निको भएर नेपाल आए र होमबेस्ड हेल्थ सर्भिसका लागि कम्पनी खोले अनलाइन हेल्थकेयर प्राइभेट लिमिटेड र सोही अन्तर्गत संचालन हुने गरी मेरो हस्पिटल हिल एट होम । ती डाक्टर हुन् रुपनारायण शाह जो मेरो हस्पिटलका संस्थापक अध्यक्ष हुुन् । डा शाहसँग हेल्थ टिभी अनलाइनकी कल्पना आचार्यले कुराकानी :
मेरो हस्पिटल कस्तो खालको हस्पिटल हो ?
यो हस्पिटल सम्पूर्ण रुपमा घरमै गएर सबै खालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिने हस्पिटल हो । यसमा डाक्टरदेखि स्वास्थ्यकर्मी, प्याथोलोजिष्टदेखि केयर गिभरसम्म पर्न आउँछन्। यी सम्पूर्ण सेवा घरमै उपलब्ध गराउँछौं । बिरामीको अवस्था तथा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनौट गरेर हामी उहाँहरुकै घरमा गएर सेवा दिने काम गछौं । हाम्रो मुख्य उद्देस्य भनेकै बिरामीलाई घरमै अस्पतालको जस्तो सेवा मिलोस र सहज होस भन्ने हो । अहिले त धेरैले हामीलाई बिश्वास गरेर सेवा लिइरहनुभएको छ । जो बिरामी अस्पताल जान सक्दैन उसलाई होम केयर सर्भिस अत्यन्त आवश्यक छ । हामीले बिरामीको घरलाई नै हस्पिटलको रुपमा परिणत गर्दिन्छौं । जसलाई मेडिकल सर्भिस चाहिन्छ उहाँहरुले अनलाइन बुक गरेर हाम्रो सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।
शुरुमा यो मेडिकल सर्भिस खोल्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको थियो ?
शुरुमा त सबैले स्वास्थ्यको सेवा पनि अनलाइनबाट हुन्छ र यस्तो कुरा पनि घर घरमा गएर कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरु आफै अहिले बिरामीलाई यहाँ घरमै गएर सेवा दिन्छन् भनेर रिफर गर्नुहुन्छ । यो ४ वर्षमा परिस्थिती निकै फेरिएको छ । अझ कोरोना महामारी आएपछि त झनै होमबेस्ड स्वास्थ्य सेवाको महत्व बढेको छ । सबै जना कोरोनाको कारण अस्पताल जान डराएको अवस्था छ त्यसैले पनि घरमै सेवा लिन पाए हुन्थ्यो भन्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । यो नेपालमा मात्र हैँन विश्वमा नै यसको महत्व र आवश्यकता महशुस गरिएको छ । अहिले कोरोना महामारीमा मात्रै हामीले ३ सय बढी संक्रमितलाई होममै गएर उहाँलाई चाहिने सम्पूर्ण सेवा दिइसकेका छौं । अब बल्ल सबै जनाले यसको महत्व बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्छ । पहिल त निकै गाह्रो थियो नि ।
कस्ता व्यक्तिले तपाइँहरुको सेवा लिइरहेका छन् ?
धेरै जसो हामीकहाँ सेवा लिन चाहने भनेको दीर्घरोगी त्यसमा पनि जेष्ठ नागरिक नै हो । त्यसमा पनि प्यारालाइसिसका कारण लामोसमसय हेल्य सर्भिस लिन पर्ने तर अस्पताल बस्न गाह्रो हुनेहरु । अर्को कुरा एकल परिवारमा छोराछोरी सबै विदशेमा हुन्छन्। आमाबुवा घरमा एक्लै हुँदा पनि छोराछोरीहरले अनलाइनबाट बुक गराएर दैनिक रुपमा हाम्रो स्टाफबाट यो सेवा लिनुहुन्छ । त्यसैगरी कतिपयका छोराछोरी सबै काममा जानुपर्ने हुन्छ । एक जना बिरामी हुँदा अन्य सदस्यको पनि काम धन्दा चौपट हुनजान्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी उहाँहरुको रोजाइमा पर्छौ । मेडिकल सर्भिस डोर टु डोर कसरी पुर्याउन सकिन्छ भने। यो शुरु गरिएको हो । यसकोे महत्व अहिले देंखिंदैछ । धेरै जना विदेशमा बस्ने छोराछोरीले आफना आमाबाबुका लागि चेकअपको हाम्रो वेभसाइटमार्फत अपोइन्टमेन्ट लिने गरिरहनुभएको छ । साथै औषधि पनि हामी घर घरमै पुराइदिन्छौं जसले गर्दा उहाँहरुलाई ढुक्क भएको छ ।
के के सेवाहरु कसरी दिनुहुन्छ ?
अहिले हामीले एक जना बिरामीलाई चाहिने सम्पूर्ण सेवा सर्जरी बाहेक सबै घरमै गएर दिन थालेका छौं । हामीसँग सम्पर्कमा आएर फर्म भरिसकेपछि उहाँहरुको आवश्यकता अनुसार चाहिने, औषधि घरमै उपलब्ध गराउने, ड्रेसिङ गर्ने, सरसफाई गर्दिने, इन्जेक्सन लगाउने, अक्सिजनको लेबल हेर्ने, घरमै भिडियो एक्सरे, इसीजी गर्ने सम्पूर्ण काम गर्दिन्छौं । यदि उहाँहरुको कुनै डाक्टरको फलो अफ बाहिरको डाक्टरसम्ग छ भने त्यो पनि हाम्रै स्टाफले लिएर जान्छन्। बिरामीको आवश्यकतालाई हेरेर हामी प्लान गछौं । बिरामीको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ । हामीसँग सबै खालका स्टाफ छन्। स्टाफ नर्स चाहिने होकी एएनएम चाहिन्छ की एचए चाहिन्छ की सबै हेछोैं त्यही अनुसार पठाइन्छ । डाक्टरको भिजिट पनि नियमित हुन्छ । हामी उहाँहरुसँग कतिपय कुरा अनलाइन माध्यमबाट पनि गरिरहेका हुन्छौै । केही इमरजेन्सी परेमा तुरुन्त अस्पताल लैजाने काम पनि हामीले नै गछौं । यसरी अस्पतालसम्म आउन नसक्ने, घरमै बसेर सेवा लिन चाहने र कतिपय अवस्थामा घरमा कोही पनि सेवा गर्ने परिवारका सदस्य नभएकालाई मेरो अस्पताल एक किसिमको ठूलो भरोसा बनिरहको छ । यो कोरोनापछि धेरै जना अस्पताल भिजिट गर्न नै चाहनुहुन्न यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई हामी सेवा इिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीसँग फार्मेसी देखि ल्याब, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सबैको व्यवस्था छ ।
कत्तिको विश्वास गर्छन् ?
हामी कुराकानीको भरमा मात्र सेवा शुरु गर्दैनौं। किनभने हामीले जसले सेवा लिन चाहेको हो उहाँसँग कन्ट्रयाक्ट गरेर मात्र सेवा गछौं । हामी आफनो स्टाफसँग पनि कन्ट्रयाक्ट गरेका हुन्छौं । अन्य व्यक्तिको घरमा यत्तिकै स्टाफ पठाउन मिल्दैन । यदि तलमाथि भयो भने को जिम्मेवार हुने। यसको सबै लिखित रुपमै हामीसँग कापजपत्र हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि पक्ष डराउनु पर्दैन्। हामीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना पनि भएको छैन्। यो विश्वासका साथ व्यवसायिक रुपमा गरिने र दिइने सेवा हो । यसका लागि तयार नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन्। बिरामीले विश्वास गरेकै कारण आज हामी यहाँ छौं ।
अबको के योजना छ
अब मेडिकल फिल्डमा अनलाइन मेडिकल सर्भिसको एकदमै महत्व छ । त्यसैले हामीले पनि यसको दायरा झै फराकिलो बनाउने सोचेका छौं । छिट्टै यसलाई मोबाइल हस्पिटलको रुपमा लैजाने योजना छ । सो मोबाइल हस्पिटल भनेको ठ्रलो भ्यान ‘वेल इक्युप्ड’ होस् जहाँ बिरामीलाई तुरुन्त भ्यानमै इमरजेन्सी सर्भिस दिन सकियोस्। केही टेस्ट गर्न पर्यो भने गर्न सकियोस । डाक्टर, प्यारामेडिक्स सबै सोही भ्यानमा हुन्छन्। सो भ्यानमा बिरामीलाई तुरुन्त सेवा दिंदै अस्पताल लान पर्ने भए लान सकियोस्। यस्तो प्लान गरिरहेका छौ । हेरौं कति गर्न सकिन्छ ।